आइतबार सेयर बजारबाट धेरै कमाउने कम्पनीहरुमा कुन–कुन परे ? जान्नुहोस् « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
काठमाडौ । साताको सुरुवाती दिन आईतबार सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा १४ अंकको गिरावटसँगै १६१५.५८ अंकमा कायम भएको छ । बजारमा सबैभन्दा धेरै बीमा समूह १३४.३ अंकले घटेको छ । बैंकिङ, विकास बैंक, जलविद्युत्, फाइनान्स र उत्पादनमूलक क्रमशः १७, १७.४, २७.८४, ७.३४ र ३६.३९ अंकले घटेका छन् ।
अन्य समूह २५.७४ अंकले बढ्दा होटल समूह १३.१५ अंकले बढेको छ ।
आइतबार १४८ कम्पनीका १४ लाख ७६ हजार आठ सय १३ कित्ता सेयर सात हजार सात सय ८८ पटक खरिदविक्री हुँदा ७५ करोड ६० लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सबैभन्दा धेरै सिद्धार्थ बैंकको ११ करोड पाँच लाख २४ हजार आठ सय ८२ रुपैयाँको कारोबार भएको छ भने स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको चार करोडमाथिको कारोबार भएको छ । आइृतबार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा माइ हाइड्रोको दुई करोडमाथिको कारोबार भएको छ । यस्तै
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स, माछापूछ्रे बैंक, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स, बैंक अफ काठमाण्डू, एभरेष्ट बैंक लगायतको एक करोडमाथिको कारोबार भएको छ ।
आइतबार जम्मा २२ कम्पनीका सेयरधनीले आफ्नो सम्पत्ति बढाएका छन् । सबैभन्दा धेरै आरएसडीसी लघुवित्तका सेयरधनीले ८.११ प्रतिशतका दरले कमाएका छन् । नेपाल टेलिकम, सिनर्जी फाइनान्स, श्री इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्स, नेशनल हाइड्रो, नागबेली लघुवित्त, प्रिमियर इन्स्योरेन्स, एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड, दिव्यश्वरी हाइड्रो, सृजना फाइनान्स लगायतका सेयरधनीले कमाएका छन् ।